Suugaanta Dalmareenka: Safar Dayuuradeed
Suugaanta Dalmareenka: Safar Dayuuradeed Wq. Saciid Jaamac Xuseen March 21, 2010
SHEEKOOYINKA kutubta diimaha ku xusan ha ahaadeen ama kuwo dad caadi ahi qoreen ha noqdeen ee tan iyo maanta sheekooyinka safarrada ku saabsan ee dalmareenku curiyaan xiisaha ay leeyihiin wax u dhigmaa ma jiraan. U safarka dal cusub, la kulanka dad cusub, barashada dhulkooda, dhaqankooda, hab-nololeedkooda, dareenkooda iyo dadnimadooda, anshaxa
iyo adduun-araggooda, dhammaan waxay kugu dhoweeyaan inaad garatid xigmadda ka dambaysa abuurta iyo adduunka aynnu ku nool nahay. Degaankaagii, dalkaagii, iyo qarankaagii aad beri beryaha ka mid u haysatey inay adduunka ugu sittaan ayaad ka kortaa. Aqoon iyo waaya-aragnimo ayaad kororsataa iyo casharro cusub oo dareenkaaga saameeya. “Nimaan dhul marini dhaaya ma leh.” Waa murti micne weyn ku fadhida aan dad badani qota-dheerideeda dhuuxi karin. Sidaas ay tahay, misna ma aha qofkii dhoofaaba in uu tijaabada safarka ka soo marta uu sheeko la danayn karo dadweynaha ugu tebin karo. Marna sidaas uma sahlana.
Magaalada Cadan, Yemen Sheeko curintu waa fan gaar ah oo dad dhif ahi hanashadeeda awoodi karaan. Shuruudo adag ayey u baahan tahay; ay ugu horrayso in qofku intaanu ku tahanbaabin qoristeeda la yimaaddo maskax furan oo u laylsan ka-faa'iidaysiga tijaabooyinka badan ee kala duwan ee qofku adduunka iyo uumanaha kala kulmo. Wixii lala yaabo haddii sida diin-diinka layska daboolo, wax kororsi waad kala xiriir furateen. Dadkeennana ma yara inta maskax-laabashada uga dheeraysa diinka laftiisa.
BISHU WAA DIISAMBAR, Xilligu waa jiilaal. Waa waqtiga dadka CADAN deggani ay sannadka ugu jecel yihiin. Waxay ka nastaan xagaa dheeraaday iyo lurtiisa, dhidid iyo dheg-dheggiisa, daal iyo caga-jiidkiisa, caro iyo camal-xumadeeda. Anigana safar aan muddo dheer London ka dhawrayey ayaa la iigu bishaareeyey maalmahaas. Is-diyaarin degdeg ah ayaan ku dhaqaaqay anigoo ogsoon in arrimmo badan oo wax-ka-qabad u baahani qoys ahaan qabyo naga yihiin. Maalintii dhoofka ayaa kala daadsanaantaa igu heshay oo mar keliya daf nasoo tiri.
Adigoo magaalada Cadan Weyn ka soo jarmaaday, jidka maxkamaddana soo qaaday markaad waddada xeebta Khormaksar soo raacdid adoo garoonka diyaaradaha ku jeeda, shaki ma laha in dareen iyo shucuur laabtu ku doogsataa kugu dhalanayaan. Taas oo ay ugu wacan tahay laydha qabowga macaan ee waaga dildillaacay u gaarka ah iyo jawiga qurxoon ee dhinac walba xilligaa kaa qabanaya - xeebta baabuurtu marayaan, badda mawjaddeedu midigtaada ku quwad jabayaan, cirka aan weli daruuraysan iyo buuraha magaalada Cadan sida qardhaasta ku wareegsan ee Ilaahay belaayo-xijaabka uga dhigay. Si kastaad habeenkii u dhafartid, waxaa ku filan inaad xilligaas iyo jawigaas oo kale ku soo baxdid si mar keliya wahabkaas lagaaga siibo.
Muuqaalka magaalada Cadan iyo buuraha ku gadaaman Anigase bad kale ayaa igu furnayd. Halkaan ka tegayo iyo kuwaan kaga tegayaa waxa ay ku dambayn, halkaan u dhoofayo iyo waxaan kala kulmi doono, inta labadaas u dhexaysa waxyaalaha ku dahsoon sida aan uga dabbaalan doono...
Saddexdaa masa’lo ayaa maskaxdayda marna iska daba-rogmayey, marar badanna isku wada dhafmayey oo lab iyo jaha-wareer igu ridayey. Sidaan qulubaa-geddiskaas ugu jirey ayaan lixdii subaxnimao garoonkii diyaaradaha isa soo shubay. Walaalkay Xaamud iyo wiilkayga Guhaad ayaa ila socdey. Waraaqahaygu way wada hagaagsanaayeen misna wadnaha ayaa i fugfug lahaa. Waxaan intaas ka cabsanayey in askari madax-falluuq ah oo dhuunta loo galay isku kay duubo oo intaannu kala gar-baxaynno ay diyaaraddu iga tagto. Allaa sahlay oo iguma adkaan. Si fudud ayaan qaybtii miisaanka, baarista, iyo socdaalka ku dhaafay. Saacad barkeed ka dibna bas ayaa nalagu daadgureeyey oo diyaaraddii nala geeyey.
KURSIGII lamabarkaygu ku qornaa ayaan raadsadey. Gargaareyaasha diyaaradda wiil ka mid ah ayaa i kaalmeeyey. Markaan fariistay ayuu wejigayga ka bogtey.“Xaamud maxaa isu tihiin ?” ayuu i weydiiyey.‘Waa walaalkay,’ ayaan ugu jawaabay anoo wax culays ah su’aasha siinayn. Dhul shishe iyo arrimmo kale ayaa masxakaxdayda ka guuxayey. Furfurraanta iyo debecsanaanta wiilka wejigiisa ka muuqdey waa kuwo aan marna laga didayn.“Soo kac meel halkan kaaga fiican ayaan ku geynayaaye,” ayuu i yiri. Waan daba galay anigoo niyadda iska leh, ‘Allow yaw sheega inaanay ii kala duwanayn haddii dhulka lay fariisiyo iyo haddii VIP laygu maamuuso mar haddaan isku hubsaday diyaaradda London aadaysa.’ Diyaaradda dhinaceedii kale ayuu i geeyey. Kursi daaqadda xiga, kan ka sokeeyaana bannaan yahay ayuu i fariisiyey. Qaybtuu ku shaqo lahaa inuu i keenay ayaan gartay. Intaannu soo wada soconney inay walaalkay saaxiib yihiin oo isku arday ahaan jireen ayuu iga gaarsiiyey.
Diyaaraddii ayaa nala haaddey iyadoo guux iyo reen waalan isku daraysa. Jihada waqooyiga ayey foodda saartay. Kolkay majaraheedii hawada qummaati u qabsatay ayaan usoo jeestey inaan diyaaradda farshaxanka gudaha kaga dheehan aan ka daymo sugto. Daawashadaa aan u holladay la iguma simin. Mid ka mid ah diyaadradihii shirkaddii Somali Airlines Yaabkayga! Kursiga iga horreeya dhabarkiisa ayaan ku arkay weedh af-Somaali ah oo ku qoran: “Suunka xiro. Sigaarka dami.” Kan barbarkiisa ayaan eegay. Weedh af-Ingiriisi ah ayaan kala kulmay: “Fasten Seat Belts. Extiguish Cigarettes.” Diyaaraddii ayaa soo dhex maray.
Kuraasta oo dhan waxaa ku qoran weedho af-Carbeed ama af-Ingiriisiga ah, kaan daba fadhiyey mooyee. Wiilkii isoo kexeeyey siduu ii fariisiyey kursiga keliya ee af-Somaaligu ku qoran yahay ayaan fasiraad u waayey oo iga mashquulisay ka-bogashada xaradhka iyo sawirrada diyaaradda derbiyadeeda lagu qurxiyey oo aan caado u leeyahay markaan diyaarad fuuloba inaan ka bogto.
Dadkii diyaaradda soo koray ayaan isha mariyey. Aniga keliya ayaa ka Somaali ah. Mar dambe ayaan nin dhiig Somaali ah leh arkay. Shaw isna anuu isoo eegayey. Intuu soo kacay ayuu kursigii agtayda ee bannaanaa ku fariistay. Salaan ka dib, in Jeelaani Saalax la yiraahdo, uu Yamani yahay hooyadii Somaali tahay, uuna Xamar ku soo koray ayuu ila socodsiiyey. Cuntadii afurka ayuu wiilkii gargaaraha ahaa noo keenay. Markaas baan Jeelaani arrintii iga yaabisay farta ka saaray. Sirtii ayuu isna ii furfuray intaannu quraacda cunayney.“Diyaaraddani waa Air-bastii dawladda Somaaliyeed beri hore ka iibsatey dalka Jarmalka. Iyadoo aan qiimaheedii laga wada gashi bixin ayaa taliskii Xamar la cayrshey. Diyaaraddu waqtigaas garoon ka mid ah dalka Jarmalka ayey fadhidey. Sannado ka dib markii wax dawlad Somaaliyeed la yiraahdo lagu salaaxi waayey ayaa Jarmalku Diyaaraddii dalka Yamanta ka iibsheen. Ereyada Somaaliyeed ee meesha ka muuqdaa waa kuwii wershaddu kuraasta dhabarkooda ku daabacday. Kuwa afafka qalaadna waa kuwii laga dulbuuxshey markay Yamantu diyaaradda gadatay.” Yaabkii isaga ahaa waannu kala guurney oo Jeelaani ayaa si wacan iigu fasiray.
Mid kalaase igu dhashay. Yamanta oo lafteeda dagaalka sokeeyuhu sed weyn ku leeyahay ayaan ku fekerey, “Tolow, muddo intee le’eg ayey Yamantu sii wadan doontaa diyaaraddan inta iyana qamtu u dhacayso oo kolkaas weedha af-Carbeedka ah iyana laga kor geynayo kuwo af-filibbiin, Burmese, ama Sawaaxili ah.”
LIX SAACADOOD iyo lix kun oo kiloomitir ku dhowaad ayaa diyaaraddu hawada nagula soo jirtey aan hakad iyo joogsi toonna lahayn. Cirka Sacuudiga, Badda Cas, dalka Masar, Badda Bartamaha Cad, iyo dalalka Talyaaniga, iyo Faransiiska ayaannu soo wada kor marnay. Hadba goobtaanu dul joogno ayuu duuliyuhu ku dadaalayey inu nala socodsiiyo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn iyo meelaha tilmaamaha caanka leh sida Ahraamta Masar, Buuraha Alps, webiga Seine ee caasimadda Paris dhex mara.
Muuqaalka kore ee magaalada London Magaaladii London ayaa sidii maro la wadhay na hoos timi. Ballaarkeeda, qaab dhismeedkeeda iyo mulacyaynta webiga Thames ayaan indhaha la raacay iyadoo sida safar soo dhowaaday lagu yaqaan uu dareen cusubi igu dhashay. Mar labaad ayaa wadnihii iskay garaacay. Keliya markaan hubsaday in baasaboorkii lix bilood la iigu dhuftay aan usoo gudbay qolkii dadka safarka ka yimaadda lagu dhawri jirey ayaa neef Ilaahay ogyahay iga soo kuddey aan isyiqiinsaday inaan inta ifka joogta ka tirsan ahay.
Saakadii sidaannu Cadan uga soo ambabaxnay illaa intay diyaaraddu garoonka Heathrow ee London caga-dhiganaysey, ma ay jirin nus-saac ay inamadii diyaaradda ka shaqaynayey ay iga maqnaadeen. Waa mar ay wax ii sidaan iyo maray waxaan rabo i warsanayaan. Ha iska tiro yaraatee, gobta iyo akhyaartu meelna kama maqna. Kursigii weedhiisu wareegaysey iyo wiilkii gargaaraha ahaa maskxdayda kama ay bixin. Saciid Jaamac Xuseen
* Dhaqankii dib ha loogu noqdo ________________________________________________________________ We welcome the submission of all articles for possible publication on WardheerNews.com So please email your article today Opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of WardheerNews Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo tan WardheerNews Copyright � 2010 WardheerNews.com